यी कस्ता श्रीमान? श्रीमतीको काटिएको टाउको लिएर थाना पुगे श्रीमान् – PathivaraOnline
Home > अपराध > यी कस्ता श्रीमान? श्रीमतीको काटिएको टाउको लिएर थाना पुगे श्रीमान्
admin February 22, 2019 अपराध 0
भारतको मध्यप्रदेशको मुरैना जिल्लामा एक व्यक्तिले श्रीमतीको हत्या गरेपछि काटिएको टाउको लिएर थाना पुगेका छन् । घटना बुधबारको हो ।मुरैनाका पुलिस अधिकारीले यसबारे पुष्टि गरेका हुन् । पुलिस अधिकारी रियाज इकबालले भने, ‘घटना बुधबारको हो । कल्याण शाक्यवार आफ्नी श्रीमतीको टाउको काटेर थाना पुगेका थिए । उनले आफ्नी श्रीमती पंकजको हत्या गरेको हामीलाई बताए । ’ उनलाई तुरुन्त पक्राउ गरेर घटनाबारे अनुसन्धान गरिएको छ ।
उनी बसेको गाउँमा पुलिसले छानबीन गरिरहेको इकबालले जानकारी दिए ।श्रीमतीको अर्कैसँग सम्बन्ध भएको शंकामा आफूले श्रीमतीको हत्या गरेको कल्याणले पुलिसलाई बताएका छन् । स्थानीयलाई उद्धृत गर्दै पुलिसले उनीहरुको दैनिक जसो झगडा हुने गरेको बताए । पुलिसले भने, ‘बुधबार पनि दुईजना बीच झगडा भयो । विवाद यति बढ्यो कि कल्याणले पंकजको टाउको बञ्चरोले काटिदिए ।’
उनीहरुको विवाह भएको १० वर्ष भइसकेको थियो । यी दुईका तीन सन्तान पनि छन् । पुलिसका अनुसार पंकजको हत्या गरेपछि कल्याण उनको टाउको हातमा लिएर महुआ थाना पुगेका थिए । हातमा महिलाको टाउको देखेर सबै डराए । कल्याणलाई त्यसपछि पक्राउ गरियो ।
यो पनि हेर्नुहोसः
किचनको बाहिरपट्टी उही सेतो सट, कालो पाइन्ट बाहिर एप्रोन लगाएर हतार-हतार भाँडा मस्काउँदै मेसिनमा हाल्दै गरेको मानिसमा आँखा पुग्यो । ऊ कहिले ड्रिङ्स बनाउन आइपुग्थ्यो । हलका अरु ड्रिङ्स आेसार्दै थिए । लिडरले मलाई
अभिवादनसहित हात धुन सिकाउँदै थिए ।भाँडा मस्काउँदै गरेको मानिस म नजिक आयो । लिडरले परिचय गरायो । ऊ म्यानेजर रे । म झस्किएँ !!न त उसको घुमाउने कुर्ची थियो त्यहाँ न त अरुमाथि आदेश । न त काम ठूलो सानो थियो न त मैले सोचेजस्तो म्यानेजर थियो ऊ ।हजुरआमासँग टपरी गाँस्न अघि सर्दा ‘पढ्नुपर्छ, अहिलेको जमानामा नपढेकाले पियनको जागिर नि पाइन्न’ भनेर हप्काउनु हुन्थ्यो ।‘पियन भनेको कस्तो हो ?’ मेरो उत्सुकतामा ‘अरुको जुठो भाँडा माझ्ने, ट्वाइलेट सफा गर्ने’ हजुरआमाको उत्तर थियो ।
कामलाई नै सर्वस्रेष्ठ मान्ने यहाँ फरक देश, फरक भाषाका मानिसलाई नि कत्ति मज्जाले काम सिकाउँछन् । कामलाई ठूलो सानो मानिँदैन । जतिबेला पनि व्यस्त देखिन्छन् । यिनीहरुको जीवन के दिन के रात ! सुत्ने समय कम हुन्छ ।व्यस्त जीवनका कारण ट्रेनमा यात्रामा सुतेको देखिन्छ । यिनै नागरिकको अनुशसासन, लगनशीलता र मेहनतले विकासको द्रुत गतिमा पुगेको देश ।
दुःखद खबरः ६० वर्षीय बृद्धले ३ वर्षीया बालिका जबरजस्ती करणी गरपछि…